Maitiro ekubvisa Memoji stickers kubva ku iPhone uye iPad keyboard | IPhone nhau
Maitiro ekubvisa Memoji kubva ku iPhone keyboard
Memoji, Animoji uye Emoji kazhinji vanotonhorera, sei tichizoramba ... Zvisinei, neIOS 13 kwakauya kusangana kwakazara kweMemoji nekhibhodi yeIOS muchikamu cheEmoji, izvo zvakakonzera kusagadzikana mune vamwe vashandisi nekuti vanozviita. kwete kuishandisa nguva dzose kana kuti inomiririrwa nenzira dzisingazivikanwe zvichienderana nekuti ndeapi mashandisirwo. Zvakatora mavhezheni mazhinji eApple kutibvumidza kuti tibvise iyi "nyowani nyowani" iyo yakatisanganisa tisina kuidya kana kuinwa. Kana iwe uchiguta nezvimiti zveMemoji pane iyo iPhone ne iPad khibhodi, tiri kuzokuratidza maitiro ekuabvisa iwo nyore.
Apple inoburitsa iOS 13.3 uye iPadOS 13.3 yezvose zvishandiso
Chinhu chekutanga ndechekukuyeuchidza iwe kuti kuti ukwanise kumisa kuita uku kunofanirwa kuti urikumhanya ingangoita vhezheni 13.3 yeIOS, yekutanga inogonesa switch kuti ibvise iyo Memoji pane iyo keyboard. Kana iwe uchimhanyisa vhezheni yapfuura yeIOS haugone kutevera iyi dzidziso kana kuibvisa, saka ndinokurudzira kuti utange waenda Zvirongwa> Zvakajairika> Software Gadziridza kuita inoenderana yekuvandudza. Kana iwe watove waisa iyi yazvino vhezheni, usazvidya moyo uye tiri kuenda ikoko nematanho iwe aunofanirwa kuteedzera kubvisa iko kushanda.
Zviri nyore kupfuura zvaungafungidzira:
Vhura iyo iOS Zvirongwa app
Enda kune iyo General chikamu uye pinda
Kamwe mukati, tinya pa "Keyboard" kuti uwane kugadziriswa kwayo
Dzima mashandiro e "Memoji Stickers" uchishandisa switch.
Sezvatareva, chete neIOS 13.3 kana iPadOS 13.3 iwe uchave unokwanisa kudzima ichi chimiro, nekuti mune yakapfuura vhezheni haina kuratidzwa muchinja. Pakati pezvimwe zvinhu, maficha nyowani akaonekwawo mu "Nguva Yekushandisa" application, gara wakarongedzerwa vedu varairidzi kuti varambe vachiwana zvakanakisa kubva kune yako iPhone nePad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekubvisa Memoji kubva ku iPhone keyboard
Usanyengerwa, iOS 13.3 hainonoke yako iPhone
Na iOS 13.3 kudzora kwevabereki kunowedzerwa